Bogota kwadoro 6th International Nightlife Congress
Home » Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ » Bogota kwadoro 6th International Nightlife Congress
Maka afọ nke abụọ n'ahịrị, obodo Bogotá (Colombia) ga-anabata 6th International Nightlife Congress na 5th Golden Moon Awards na November 13th, yana nke 6th Colombia ExpoBar Fair, nke ndị Colombia na-ahụ maka ndụ abalị, Asobares haziri.
ExpoBar bu ihe omume ntụrụndụ kacha mkpa nke Colombia na ihe karịrị ndị bịara 3.000 gụnyere ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ ahụ, ndị ọrụ, ndị isi na ndị na-akwado ha na -emepụta ọgbakọ ebe a na-atụle isi okwu na azịza enwere ike metụtara ụlọ ọrụ abalị nke Colombia. Ebe a họọrọ maka ihe omume ndị a bụ Theatron Bogotá, bụ onye ghọrọ onye otu Gold nke International Nightlife Association n'oge na-adịbeghị anya.
Dị ka ị nwere ike isi mara, INA na-eme nzukọ ọgbakọ na mba ụwa kwa afọ yana emume inye akara ma kpebie ime emume mbipụta nke afọ a ọzọ yana Asobares na mbipụta 6 nke ExpoBar Fair.
Na mgbede nke November 13th, International Nightlife Association ga-anabata 5th Golden Moon Awards ebe n'etiti onyinye ndị ọzọ, a ga-ewepụta ndepụta "Kachasị Klọb Kasị Mma nke ụwa 100". Ọnọdụ Klọb Kasị Mma n'ụwa ka Hï Ibiza nọ ugbu a.
Onye isi oche Asobares, Maazị Camilo Ospina Guzmán kwuru taa, “Obi dị anyị ezigbo ụtọ na ihe ngosi abalị kacha mkpa na Colombia na-ezukọta ọzọ na nzukọ ọgbakọ abalị kacha mkpa na ụwa iji nwee nnukwu mmemme ga-enwe mmetụta pụtara ìhè na ndụ abalị. n'ụwa nile ”.
Dị ka Maazị Joaquim Boadas de Quintana si kwuo, Secretary General nke International Nightlife Association, “Anyị nwere obi ụtọ ịmekọ ihe omume kwa afọ anyị na ExpoBAR, nke ndị otu anyị nọ na Colombia, Asobares kwadoro. Ọ ga-amasị m ịrịọ ụlọ ọrụ achụmnta ego na-edu ndú kwa abalị na ụwa ka anyị sonye na ihe omume ndị a, ebe ha ga-egosi akara ọdịnihu nke ngalaba anyị n'ọkwa ụwa niile.
Nnukwu ala ọmajiji dara na Papua New Guinea na Solomon Islands, ọ nweghị egwu tsunami na Hawaii
FCM Njem Ngwọta na-eme ka ngwanrọ nke NDC zuru ụwa ọnụ mee ka Amadeus na Sabre nwee ọsọ ọsọ